दीपक सापकोटा – मझेरी डट कम
चिरन तामाङको दुःख
कानमा बज्रिन्छन् कठोर आवाजहरू
झरीको स्वरसँग मिसिएर ।
लियो टाल्स्टोयले ‘बुढो खोल्सतोमेर’ कथामा ‘ईश्वरले मान्छेलाई तीनवटा रहस्यको ज्ञानबाट वञ्चित गरेको’ बताएका छन् ।
जीवन र अनुभव नै मेरा लेखन हुन्- शारदा शर्मा
महिलाका आँखाले संसार हेर्दा कवयित्री शारदा शर्माले उज्यालो कमै देखेकी छिन् । ‘अग्निस्पर्श’मा उनले लेखेकी छिन्-‘योनी, पाठेघर र त्यहाँको डिम्बबाहेक स्वास्नी मान्छेलाई कसैले मान्छेको रूपमा हेरेको छ ? मान्यता प्रदान गरेको छ ? प्रेम गरेको छ उसलाई ?’
माघको दोस्रो हप्ता मध्याह्नको करिब १२ बजे कोठामा छिर्ने घामको लोभमा कुर्सीलाई झ्यालतिर बढाएर कम्प्युटरमा केही खोजिरहेको थिएँ ।
काठमाडौंनजिकको एउटा रमणीय गाउँमा बस्थ्यो, रमेशको परिवार । उसका दाजुभाइ थिएनन् । ऊ गाउँकै स्कुलमा पढ्थ्यो । हिसाब पढ्न ऊ निकै रमाइलो मान्थ्यो । आकाशमा उडेका चरा हेर्दै, गाइने कीरा र पुतलीसँग जिस्कँदै रमाउँथ्यो, रमेश । ऊ अहिले सात वर्षको भयो । विज्ञानका नौला र रमाइला कथा पढ्न खुब रमाउँथ्यो ऊ । कक्षाका अरू साथीभन्दा निकै फरक किसिममा प्रस्तुत हुन्थ्यो, रमेश ।
पिठ्यूँ भाँच्चिने गह्रुँगो भारीले थिचिएर
पहाडबीच ढुंगाको कापबाट
उम्केर आएका छन् केही उज्याला आँखा
के बोकेर ओरालो लाग्दै होलान्
ती लड्खडाइरहेका पिँडुलाहरू ?
तिम्रो लहैलहैमा यता र उता
टाढा-टाढा भौँतारिए म
पुष्ट र मस्त शृंगारको तन्मयतामा
बुइँमा चचहुई…चचहुई मच्चिरहेँ
शोकले पोतेको मन
निःशब्द अन्धकार मध्यरातबीचमा
मसानघाटमा ताण्डव गर्दै पाउँछु
आफैँ विस्मित छु म
म आफैँ हुँ वा भूत वा अतृप्त आत्मा !
आकाशको पल्लोछेउ हेर्दै, उनी बोल्थिन्,
हेर त ! फेरि जलेछ आकाश
फूलका वयहरूबाट तपतप झरेका
शीतहरू हत्केलाभरि राखेर
राती जलेको आकाशमा
एकाबिहानै मैले तिमीलाई देखेँ ।
परदेश अनुभव, मनमा गढेका सुक्ष्म अवलोकनका दृश्यपट अनि प्रेमिल तरङ्गहरुको तीव्र अनुभूति मिसाएर स्रष्टा दामोदर पुडासैनी किशोरले एउटा कृति ल्याएका छन्- ‘यात्राका प्रेमिल तरङ्गहरु ।’
दामोदर कवि हुन् भन्ने मात्र थाहा थियो । तर उनको यो गद्य साहित्य पढिसकेपछि उनी राम्रै गद्य पनि लेख्छन् भन्ने लाग्छ । जुन-जुन मुलुक घुमे ती मुलुकहरुमा उनले धेरै कुरा देखे र भोगे पनि । नयाँ अनुभवहरु बटुले । तिनै घटना र अनुभव र कृतिमा उतारेका छन् दामोदरले ।
पाइला निरन्तर बढिरहेकै छन्
लक्ष्य तैपनि अदृश्य नै छ ।
हातहरू निरन्तर खटिरहेकै छन्
पेट तैपनि भोकै छ ।
संघर्षहरू निरन्तर चलिरहेकै छन्
विभेद तैपनि बढ्दो छ ।
फूलहरूमा जीवनको आयु खोपेर
चोरेर सुनगाभाको पत्र
क्यानभासमा रङ पोत्ने
परदेशी घामस“गै मिलेर
शरद खोजिरहेछ ।